Fomba Hahasalama Kokoa: Mampiasà Vatana
Fomba 3—Mampiasà Vatana
“Raha fanafody hohanina ny fanatanjahan-tena, dia izy io no fanafody hasain’ny dokotera ampiasaina indrindra.” (Sekoly Fianarana ho Mpitsabo ao Amin’ny Oniversiten’i Emory) Anisan’ny tena mahasalama antsika ny fampiasana vatana.
Mampiasà vatana. Ho falifaly kokoa, hisaina tsara kokoa, hihamatanjaka, ary hahavita asa kokoa ireo zatra mampiasa vatana. Tsy hahia na hatavy loatra koa ianao raha mampiasa vatana sy misakafo tsara. Tsy voatery hanao fanatanjahan-tena mampijaly na mafy be anefa ianao. Tena hahasoa izany raha atao antonony sy imbetsaka isan-kerinandro.
Tsy ho mora reraka ianao sady tsy atahorana firy ho tapaka lalan-dra na harary fo raha mihazakazaka, manao dia maika, mitaingina bisikileta, na manao fanatanjahan-tena hafa. Tokony hahatsemboka anao sy hampitepo ny fonao haingana kokoa izany. Hihamafy ny taolanao ary hihamatanjaka ny hozatrao sy ny rantsambatanao raha manao an’ireo ianao ary mibata fonjam-by sy manenjana vatana. Hiasa tsara koa ny vatanao ka handray soa avy amin’ny sakafo haninao ianao ary tsy hatavy na hahia loatra.
Mahafinaritra ny mampiasa vatana
Mandehana an-tongotra. Mila fanatanjahan-tena isika rehetra, na antitra na tanora, ary tsy voatery handoavam-bola izany. Tsara kokoa, ohatra, ny mandeha an-tongotra noho ny mandeha fiara na bisy. Raha mety, tsy aleo ve mandeha an-tongotra toy izay hiandry bisy? Ho tonga aloha kokoa aza angamba ianao amin’izay. Ry ray aman-dreny, ampirisiho hanao kilalao mampiasa vatana ny zanakareo, ary eny an-kalamanjana raha mety. Hanatanjaka azy izany sady hahatonga ny vatany manontolo hiasa tsara. Tsy ho toy izany kosa ny vokany raha tsy ampiasana vatana ny fialam-boliny, toy ny lalao video.
Hahasoa anao foana ny mampiasa vatana araka ny antonony, na firy taona ianao na firy taona. Aleo anontaniana dokotera ny fomba anombohana an’izany raha be taona ianao na marary, ary mbola tsy nanao fanatanjahan-tena. Manaova fanatanjahan-tena anefa! Hatanjaka foana ny hozatrao ary ho mafy ny taolanao raha manao fanatanjahan-tena tsikelikely sy tsy be loatra ianao, na dia efa tena be taona aza. Manampy ny be taona tsy ho mora mianjera koa izany.
Fanatanjahan-tena no nanampy an’i Rustam, ilay voaresaka tany amin’ny lahatsoratra voalohany. Nanomboka nihazakazaka kely isa-maraina, indimy isan-kerinandro, izy mivady, fito taona lasa izay. Hoy izy: “Nitady hevitra tsy handehanana izahay tamin’ny voalohany. Mampahazoto anefa ny misy namana, ka lasa mahafinaritra anay izany sady lasa fahazaranay.”
Hizara Hizara Fomba 3—Mampiasà Vatana